Creative Writing » တီကောင်များနှင့်၊မိတ်သင်းဖွဲ့လျက်	28
အခုတော့ ကျမ တီကောင်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်နေပါပြီ။ မိုးလေး တပြိုက်နှစ်ပြိုက်ရွာလိုက်ပြီဆိုရင် သူတို့နဲ့ ကျမ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရပါပြီ။
ခင်ဇော် says: တီကောင် အကြောင်းးဆိုတော့ နည်းးနည်းး ပွားးအူးးမယ်..
ဟိုဘက်ရော ဒီဘက်ရော ခေါင်းးတွေမို့ ပြန်ကွေ့ စရာမလို သွားးလို့ရတယ်.. ငယ်တုန်းးကတော့ တီကောင်မြင်ရင် မြွေတွေ့ တာထက် ပိုအော်တာ..
padonmar says: နောင်ဆို သူများတွေက တီဒုံလို့ ခေါ်တိုင်း ငါ့ကို တီကောင်လို့ ပြောသလားလို့ မလုံမလဲ ဖြစ်နေမိမှာပဲ။
Ma Ma says: အိမ်မှာလည်း ရေချိုးခန်းထဲမှာ တီကောင်တွေအများကြီးပဲ။
အဲ… ကိုယ့်ကိုကိုယ် မောဟဖုံးနေပါလားလို့ အသိတော့ မ၀င် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ချစ်မလည်း တီမျိုးဆက်ပါလို့ ဖြစ်မယ်။တီတီမမပေါ့။
surmi says: တီကောင်ကတော့ မကြောက်ရေးချ မကြောက် ဘယ်ကြောက်ပါ့မလဲ ငယ်စဉ်မသိတတ်ခင်တုန်းက ငါးမြှားချိတ်မှာတပ်ပြီး ငါးမျှားခဲ့တာကိုးး
ပြောရင်း အကုသိုလ်တွေဘက်ရောက်ကုန်ပြီ .
ဘယ်တော့များ ငါးမျှားချိတ်မှာ တပ်ပြီးဘဝတုံးမယ်ဆိုတာ နည်းနည်းလေးမှမတွေးမိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ဆာဆာရေ
မြစပဲရိုး says: ဒီမှာလဲ “တီမြ” ပါ “တီဒုံ” .
padonmar says: အေးတဲ့ အရပ်မှာ အဲသလို အကောင်တွေ ရှားမယ်ထင်ပါရဲ့။
​ဒေါ် လေး says: တီကောင်တွေလို ပျော့စိစိ အကောင်တွေမြင်ရင်ကို ကြက်သီးထတယ်
padonmar says: မိန်းမစရိုက်လေ၊ကာတွန်းလေးတောင်ရှိသေး။စစ်သမီးက အိမ်ခန်းထဲမှာ ကြွက်ကလေးကို တွေ့ပြီး ခုံပေါ်တက်ရပ် အသားကုန်အော်နေတဲ့ အကြောင်း။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ညဘက် ရေချိုးခန်းမယ် သတင်းစာစက္ကူလေး ခင်း
padonmar says: မောင်ဂီ ဘာလုပ်ခဲ့လဲ သိတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: အာတီဒုံဂျီး ခိုနီကြတော့ ကြောက်ဆြာမီကောင်းဗူးနော်…
padonmar says: ခိုနီဆို ဘယ်ကြောက်ဖို့ ကောင်းမလဲ။
Mike says: .အိမ်ကရေချိုးခန်ထဲလည်း ရှိပါ့
.ငရဲ ငအုံတော့ ကရုမစိုက်ပါဘူးဗျာ…ခုကကိုယ်ချင်းစာတတ်သွားလို့ မလုပ်ဖြစ်တော့တာပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ကိုယ်ချင်းစာတရားကပဲ လောကကြီးကို လှပအောင် လုပ်ပေးနိုင်တာပါ ဦးမိုက်ရယ်။
Kaung Kin Pyar says: တီကောင်ကတော့ ဘယ်လောက်ကြီးပဲ မြင်နေရမြင်နေရ မြင်တိုင်း ရွံ့မိတာတော့ အမှန်ပဲ…။ သူတို့ကိုယ် အေးတိအေးစက်မှာ တွန့်လိမ်တွန့်လိမ်ဖြစ်နေတဲ့ အဲ့ အင်ဗာတီဗရိတ်တွေကို မြင်တိုင်း အသည်းယားတယ်….။
padonmar says: တီဒုံက ဂေါက်ကလပ်မန်ဘာပါဆို။
အောင် မိုးသူ says: တီကောင်လေးတွေကနေ အသိတစ်ချက်ပေါ့နော်။ တီတို့ဘာတို့တောက် မကြောက်ပါဘူး။ လောကမှာ အကြောက်ဆုံးက မြွေပဲ။
padonmar says: အဘိဓမ္မာရုပ်ပိုင်းသင်တော့ အသေးဆုံးရုပ်ကလာပ်တိုင်းမှာ ဓာတ်ကြီးလေးပါးအပြင် အဆင်း၊အသံ၊အနံ့၊အရသာ ရှိတယ်တဲ့၊
aye.kk says: တီတွေကနေစွန့်ထုတ်ပစ်တဲ့
padonmar says: တီကျစ်စာကြောင့် မြေသြဇာပိုကောင်းသွားတာ အမှန်ပါပဲ။
Wow says: တီကောင်ကိုမကြောက်ဖူး ခေါက်ဆွဲကြော်စားမလားဆိုပီး ကြောက်တဲ့သူတွေကို လိုက်တို့ဖူးတယ်.. တီတူးပြီး ဘဲကျွေးဖူးတယ် ခုတော့ မလုပ်တော့ပါဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: မမဝေါင်းကိုလည်း ဝေါင်ဝေါင်ရှေးမှ. တီနဲ့ လိုက်တို့မှာ စိုးလို့.
kai says: အိမ်ထဲမှာ.. ကြွေပြားနံရံမှာ.. အဲလိုကောင်တွေနဲ့..တော်တော်ရွံ့စရာကောင်းတယ်လို့တော့ယူဆမိ..။
ငတ်ရင်တော့..စားကြမှာပဲ…ထင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: သူကြီး
kai says: တီကောင်က.. မရှိသင့်တဲ့နေရာရှိနေတာမို့ပါ…။
တရားသဘောအရပေါ့..။ မတူတဲ့အတွေးနဲ့ပြောကြည့်ရရင်.. တီကောင်မှာ.. ဖို/မ တွဲနေသမို့.. လူတွေမှာသာ ဖို/မတွဲနေရင်..တော်တော်အလှုပ်ရှုပ်သက်သာမယ်တောင်တွေးမိ..။
ဂေးတွေ ..လိင်တူချင်းလက်ထပ်တာကို…(အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းတိုးလာမှာမို့) အစိုးရတွေအသိအမှတ်ပြုသင့်ကြောင်း.. အဖြေထွက်လာ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12162
Alinsett @ Maung Thura says: စာရေးကောင်းသူဆိုတော့…တီကောင်လေးတွေ မြင်မိတာကိုတောင်… အကျိုးများစေတဲ့ စာ ဖွဲ့တတ်တယ်…